Pejy 2 amin_ny 330
Tantara mikasika ny Azia Atsinanana
Shina4 herinandro izay
Nanery ny tanora Uyghurs handao an'i Shina ary hijanona any an-tsesitany ny politikan'ny governemanta Shinoa amin'ny fanavakavahana ara-pirazanana sy ara-pinoana.
Hong Kong (Shina)08 Jolay 2020
Namintina ny fihantsian'ny mpanao fihetsiketsehana ny afisy lehibe iray. "Tianay p..y i Hong Kong" hoy ny fivakiny.
Vietnam04 Jolay 2020
Gadra politika teo aloha noho ny fanehoan-kevitra miresaka momba ny niainany taorian'ny nisamborana azy sy ny fiantraikan'ny famonjana azy teo amin'ny fianakaviany.
Shina03 Jolay 2020
"Ny hafatra iraisampirenena ambadika fahombiazan'ny latsabatom-panesorana an'i Han Kuoyu dia ny nilazan'ny vahoakan'i Taiwan hoe Tsia amin'i Shina"
Shina02 Jolay 2020
Japana02 Jolay 2020
Shina30 Jona 2020
Japana29 Jona 2020
Filipina29 Jona 2020
Timor Atsinanana24 Jona 2020
"Loza mitatao ho an'ny rehetra io tolodalàna io, indrindra fa ireo olona marefo tsy manana fifandraisana politika na tsy manam-bola. "